Mamandrika fanangonana Bulk Kerbside - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Torolàlana fanangonana Kerbside betsaka
Mamandrika fanangonana Kerbside Bulk an-tserasera
Manokàna famoriam-bola marobe amin'ny alàlan'ny telefaona
Serivisy fanangonana Kerbside betsaka
Ny entana be loatra, mavesatra loatra na lehibe loatra ka tsy azo angonina ao anaty dabanao dia azo angonina ho fanangonana amoron-dalana. Ny Filan-kevitry ny morontsiraka afovoany dia manome fanangonana hatramin'ny 6 an-tariby ho an'ny mponina ao aminy isan-taona. Ny fanangonam-bokatra tsirairay dia tsy tokony hihoatra ny 2 metatra toratelo ny habeny, izay eo ho eo amin'ny fahafahan'ny tranofiara boaty mahazatra. Azo alamina ho an'ny zaridaina sy zavamaniry na ho an'ny kojakoja an-trano amin'ny ankapobeny.
Avereno jerena azafady ireto torolàlana manaraka ireto alohan'ny hamandrihana ity serivisy ity.
Tena ilaina ny famandrihan-toerana - Mihodina midina ity pejy ity hahitanao ny fomba famandrihana ity serivisy ity, anisan'izany ny rohy mankany amin'ny tranokalanay famandrihana an-tserasera.
Mba hahazoana antoka fa voangona ny fitaovanao dia araho ireto torolalana ireto:
Ohatrinona ny fako hapetraka amin'ny fanangonana:
Ny tokantrano manana serivisy an-trano manara-penitra dia mahazo fanangonam-bokatra 6 isan-taona
Ny habe ambony indrindra amin'ny fanangonana iray dia ho an'ny 2 metatra toratelo (eo ho eo ny fahafahan'ny tranofiara boaty mahazatra)
Raha toa ka apetraka miaraka amin'ny fotoana iray ny zavatra ankapobeny sy ny zava-maniry an-jaridaina be dia be, dia tsy maintsy apetraka tsara ao anaty antontam-bato samihafa. Izany dia isaina ho fanangonam-bokatra 2 farafahakeliny
Averina isan-taona amin'ny 1 Febroary ny fahazoan-dàlana marobe amin'ny sisin-dalana
Azafady, azafady: Raha toa ianao ka nametraka fako maherin'ny 2 metatra toratelo, dia azo alaina amin'ny fanananao ny fanangonana mandra-pahavitan'ny fanesorana. Raha tsy misy zo tavela, ny fako dia havela eo amin'ny sisin-dalana mba hanarianao ny tenanao.
Ahoana ny fanolorana ny fitaovana betsaka ho an'ny fanangonana:
Tsy maintsy mamandrika ny fanangonam-bokatra eny amoron-dalana ianao alohan'ny hametrahanao ny entanao ho fanangonana
Rehefa voafandrika, azafady mba ho azo antoka fa apetraka eo amin'ny sisin-dalana ny fitaovana fanangonam-bokatrao ny alina mialoha
Ny fitaovana dia tsy tokony havoaka ho an'ny fanangonana mihoatra ny iray andro mialoha ny fanompoanao
Apetraho eo amin'ny sisin-dalana eo anoloan'ny fanananao eo amin'ny toerana fanangonam-bokatra mahazatra anao ny entana
Tsy maintsy apetraka tsara ny entana mba hahazoana antoka fa afaka miditra sy mitantana ny entanao ny mpiasanay
Ny fitaovana dia tsy tokony hanelingelina ny lalan-tongotra, ny lalan-dàlana na manelingelina ny dia an-tongotra
Aza mametraka zavatra tsy mety amin'ny fanangonana - tsy ho angonina
Aza mametraka entana mampidi-doza ho an'ny fanangonana, mety hampidi-doza ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny mpiasantsika ireo entana ireo rehefa manala ireo entana ireo amin'ny sisin-dalana. Ho an'ny fanariana akora simika, loko, menaka maotera, tavoahangy entona ary bateria fiara dia ampiasao azafady Conseil Chemical Collection Service. Azafady, ario amin'ny alalan'ny daba fanariam-pako any amin'ny hopitalim-panjakana, trano fidiovana ho an'ny filankevitra ary fivarotam-panafody eo an-toerana. Tsidiho ny anay Pejy fanariana Syringe azo antoka Raha mila fanazavana fanampiny.
Raha toa ka apetraka miaraka amin'ny fotoana mitovy ny zavatra ankapobeny sy ny zava-maniry an-jaridaina dia tsy maintsy apetraka amin'ny antontam-bato samihafa. Izany dia isaina ho fanangonana 2 amoron-dalana
Ny fitaovana dia tsy tokony hihoatra ny 1.8 metatra ny halavany
Ny fako ankapobe sy azo ariana izay ariana amin'ny fomba mahazatra ao amin'ny serivisy fanangonam-bokatra mena sy mavo dia tsy ekena ho anisan'ny serivisy fanangonana betsaka, ao anatin'izany ny fako sakafo, fonosana sakafo, tavoahangy ary kapoaka.
Ny fako avy amin'ny zavamaniry dia tokony hafatotra amin'ny amboara azo fehezina miaraka amin'ny kofehy voajanahary
Ny hazo sy ny hazo dia tsy tokony hihoatra ny 30 cm ny savaivony
Ny fitaovana dia tsy maintsy maivana tsara mba esorin'ny olona roa
Ny zavatra kely dia tokony hafatotra, fonosina, harona na boaty
Ny zava-maniry an-jaridaina toy ny tapa-bozaka sy ny mulch dia tsy maintsy atao anaty kitapo na boaty
Metal sy Whitegoods:
Ny entana metaly rehetra ekena natokana ho an'ny fanangonana amoron-dalana betsaka, anisan'izany ny whitegoods, dia averina ao anatin'ny serivisy.
Ny Filankevitry ny morontsiraka afovoany dia manasaraka ireo entana metaly ho an'ny fanodinana eny an-toerana alohan'ny handefasana ny ambiny any amin'ny fanariam-pako
Rehefa hatao ny fanangonana:
Ny fanangonam-bokatra betsaka amin'ny sisin-dalana dia atao mandritra ny andro fanangonam-pako manaraka, raha toa ka atao iray andro fiasana feno mialoha ny famandrihana.
Raha tsy izany dia hatao ny herinandro manaraka ny fanangonana. Ohatra: Ny famandrihana natao tamin'ny alatsinainy dia azo alaina amin'ny fanangonana alarobia, raha ny famandrihana amin'ny fanangonana ny alatsinainy dia tsy maintsy atao amin'ny alakamisy mialoha.
Raha te hianatra momba ireo zavatra angonintsika dia jereo eto ambany:
Famoriana Kerbside betsaka – Ekena amin'ny ankapobeny ny tokantrano
FANAMARIHANA MOMBA NY ASBESTOS SY NY FIBRO PRODUCTS
Boards compressed composite (araka ny voalaza etsy ambany) TSY avela hapetraka ao amin'ny fanangonanao amoron-dalana. Raha hita ny iray amin'ireo zavatra ireo CLEANAWAY dia tsy afaka manangona misy ny fako betsaka anao.
Ny vokatra tsy mifanaraka amin'izany dia ahitana: fibre na inona na inona (vaovao na antitra), asbestos sheeting, fibre simenitra simenitra, fibre reinforced simenitra vokatra, Blue Board, Hardiplank na compressed fibre sheeting.
CLEANAWAY amin'ny anaran'ny Central Coast Council dia manana zo handà tsy hanangona enta-mavesatra misy an'io akora io na akora mitovy amin'ireo karazana vokatra ireo noho ny mety hisian'ny fibre asbestos.
Ireto zavatra manaraka ireto dia ekena amin'ity serivisy ity:
vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana ary vata fampangatsiahana
Televiziona sy solosaina
Fitaovana sy kilalao ho an'ny zazakely
Fitaovana sy fitaovana zaridaina
Kojakoja ara-panatanjahantena sy fitaovana fanaovana lasy
Tsihy sy karipetra (voahodina sy afatotra amin'ny amboara azo fehezina)
Azafady mba ho azo antoka fa ny entana kely dia nofonosina, nasiana kitapo na baoritra.
Famoriana Kerbside betsaka – Zavatra tsy ekena ho an'ny tokantrano
Ireto zavatra manaraka ireto dia tsy ekena amin'ity serivisy ity ary tsy esorina amin'ny sisin-dalana:
Fitaratra na fitaratra misy fitaratra fitaratra avy amin'ny varavarankely, tampon-databatra, fanaka misy varavarana fitaratra na zavatra rehetra misy fitaratra
Fako mampidi-doza toy ny loko, asbestos sheeting, simika, fanafody tsy ilaina ary ranon-javatra
Ny fitaovana fanorenana anisan'izany ny biriky, taila, Gyprock, beton, sns.
Birao voaporitra mitambatra ao anatin'izany ny: fibre na inona na inona (vaovao na antitra), takelaka asbestos, takelaka simenitra fibre, vokatra simenitra nohamafisina amin'ny fibre, Blue Board, Hardiplank na takelaka fibre compressed.
Fako zaridaina - anisan'izany ny zavamaniry, tany, vato, sns.
Fitaovana izay tsy azon'ny olona roa esorina ara-drariny
Fitaovana izay mihoatra ny 1.8 metatra ny halavany
Inona no mitranga amin'ny fanangonako Bulk Kerbside?
Ny entana rehetra tsy vita amin'ny metaly izay apetraka ho an'ny famoriam-bola ankapoben'ny tranon'ny Kerbside dia ariana any amin'ny fanariam-pako eo an-toerana. Raha mbola tsara kalitao ny entanao dia eritrereto ny manome azy ireo ho an'ny asa soa, mivarotra azy amin'ny Internet na manao fivarotana garazy!
Famoriana Kerbside betsaka – Ekena ny zava-maniry zaridaina
Foibe sy hazo (tsy tokony hihoatra ny 30cm ny savaivony)
Hazo tsy voatsabo (tsy voatsabo, tsy voaloko, tsy misy fantsika)
Ny voly zaridaina betsaka dia aleo mifatotra amin'ny amboara azo fehezina miaraka amin'ny kofehy voajanahary.
Tsy maintsy apetraka ao anaty baoritra na kitapo ny zava-maniry mirefarefa toy ny bozaka sy ny mulch, na izany aza, ny saofera dia handroaka ny ao anatiny ao ambadiky ny fiara ary hamela ireo baoritra na kitapo eo amin'ny sisin'ny sisin-dalanao mba harianao.
Azafady, azafady: mety ho triatra/rovitra ny kitapo mba hanesorana tsara ny zavamaniry ao an-jaridaina. Raha te hampiasa ireo kitapo indray ianao, dia anontanio anay ny momba izany amin'ny fotoana famandrihana ary asio naoty eo amin'ny kitapo ho hitan'ny mpamily.
Famoriana Kerbside betsaka – Zavamaniry an-jaridaina tsy ekena
Hazo voatsabo, voaloko na voaloto
Zavatra tsy zavamaniry zaridaina
Voankazo na hazo izay mihoatra ny 30cm ny savaivony
Izay zavamaniry misy tsilo
Inona no mitranga amin'ny fanangonako Zavamaniry Zaridaina betsaka?
Ny Cleanaway dia manatitra ny akora any amin'ny toeram-pivarotana zezika. Betsaka ny vokatra vokarina ao amin'ireo trano ireo, anisan'izany ny mulches, zezika organika, tany amin'ny tany, fangaro amin'ny vilany ary akanjo ambony, izay amidy amin'ny indostrian'ny fambolena isan-karazany.
Hafindra any amin'ny tranokalanay famandrihana 1coast ianao. Avereno azafady ireto fampahalalana manaraka ireto alohan'ny famandrihana ny fanangonanao:
Azafady mba ampahafantaro fa namandrika fanangonam-bokatra amoron-dalana TSY AZO OVANA NA TSY AFAKA.
Natao ny famandrihana anao rehefa nahazo a LAHARANA REFERENCE SY EMAIL FAMPIASANA.
Raha tsy mahazo a LAHARANA REFERENCE SY EMAIL FAMPIASANA tsy vita ny famandrihanao.
Tsindrio eto raha hanao famandrihana
Fanamarihana manan-danja momba ny vokatra Asbestos sy Fibro
TSY avela hapetraka ao anaty fanangonam-bokatra ny zana-kazo mitambatra (araka ny voalaza etsy ambany) ankoatry ny solaitrabe mifototra amin'ny hazo/MDF.
Raha hita ny board compressed composite tsy hazo/MDF CLEANAWAY dia tsy afaka manangona ny fako betsaka anao.
Ny vokatra tsy mifanaraka amin'izany dia ahitana fibre na inona na inona (vaovao na antitra), asbestos sheeting, fibre simenitra simenitra, fibre reinforced simenitra vokatra, Blue Board, Hardiplank na compressed fibre sheeting.
Ny Cleanaway amin'ny anaran'ny Filankevitra dia manana zo handà tsy hanangona entana misy an'io akora io na akora mitovy amin'ireo karazana vokatra ireo noho ny mety hisian'ny fibre asbestos.
Raha te hamandrika an-telefaonina sy hiresaka amin'ny mpandraharahan'ny Customer Service dia antsoy ny 1300 1COAST (1300 126 278) Alatsinainy hatramin'ny Zoma 8 maraina hatramin'ny 5 ora hariva (anisan'izany ny fialantsasatra). Tsindrio ny 2 rehefa asaina miresaka amin'ny mpandraharaha iray.
Azafady mba ampahafantaro fa namandrika fanangonam-bokatra amoron-dalana TSY AZO OVANA NA TSY AFAKA. Natao ny famandrihana anao rehefa mahazo laharan'ny famandrihana ianao.